Resipeo kebab kisoa ao an-trano | Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra
Raha ny marina dia tiako ny mahandro. Ary tsy misy fifaliana lehibe kokoa ho ahy raha toa ny an'ny ankohonako ny lovia. Amin'ity tranga ity dia manandrana mandray an-tsaina ny nuansa rehetra amin'ny resipe aho ary avy eo manaraka tsara ny fomba fahandro mba ho tsara indray ny vokany.
Ka nandritra ny taona maro dia namolavola fomba fanamboarana hena hanatsarana hena ho an'ny barbecue aho sy ny fomba fanomanana azy. Izay tiako zaraina izao. Amin'ireo misy eny an-tsena: henan'omby, henan-kisoa, zanak'ondry, akoho, dia tianay kokoa ny henan-kisoa. Mila maka kapila ianao. Koa satria eto amin'ity toerana ity, ny hena dia tsy manintona ary mety indrindra amin'ny fandrahoan-tsakafo amin'ny ampahany lehibe. Notapahiko ireo sombin-toratelo mitovy habe amin'ny 3 sy 3 santimetatra ny habeny. Ny hena dia tsy maintsy esorina.
Aorian'ny fanapahana dia apetrako ao anaty vilany vy tsy misy fangarony miaraka amin'ny 2-3 litatra ny volako ary hafafiko amin'ny sira sy dipoavatra mba hanandrana azy. Afangaro tsara aho ary apetraka amin'ny toerana iray ihany ilay tavoara mayonnaise "Provencal". 180 grama dia ampy. Ny tena zava-dehibe dia ny fonosana rehetra dia voaravaka mayonnaise. Ary avelako ao anaty vata fampangatsiahana mandritra ny ora maro izany. Eny, andao lazaina, ny maraina dia mahandro ny hariva isika.
Tombontsoa biriky amin'ny barbecue fandrahoan-tsakafo
Mandritra ny matsatso ny hena dia holazaiko aminao ny grill. Ny tsara indrindra, araka ny hevitro, ny barbecue dia efa-joro apetraka amin'ny tany amin'ireo biriky apetraka amin'ny sisiny. Ao anatin'ity zoro boribory valo ity dia mandrehitra afo aho. Maka kitay birch aho. Azo atao izany raha ampiana ala hazo aspen vitsivitsy. Ny kitay dia tokony hodorana tanteraka, ho arina. Raha tsy may ny afara iray na roa dia esoriko amin'ny grill amin'ny fotoana manaraka. Amin'ity tranga ity dia hafana tsara ny biriky, mamoaka hafanana infrared. Izay no antony itiavako an'io fomba io noho ny barbecue vy.
Inona no fomba tsara indrindra handrehitra afo hanendasana hena
Tsy mampiasa arina varotra aho satria mila mampiasa ranon-tsolika. Tsy mino aho fa tsy misy setroka manimba. Angamba ara-kevitra, tsy hiady hevitra aho. Araka ny takatrao, mipetraka amin'ny trano tsy miankina aho, ary ny faritry ny tranokala dia mamela anao handrehitra afo eo afovoan'ny zaridaina. Saingy tato ho ato dia nandrehitra arina tao amin'ny fatana sauna taloha aho. Izay natokana handrahoana ovy ho an'ny akoho amin'ny fahavaratra. Azo antoka fa azo antoka kokoa noho izany.
Fanomanana hena ho an'ny barbecue
Ary noho izany, saika may ny ala, tsy misy lelafo lehibe. Afaka antsasak'adiny dia ho vonona ny arina. Azonao atao ny mandeha amin'ny henan-tady amin'ny skewers. Manana koveta fisaka sy endrika telozoro aho. Tsy maintsy lazaiko avy hatrany fa mety kokoa ny fisaka. Ny tena izy dia mila soloina 180 degre tsindraindray. Ary miaraka amin'ny skewers triangular dia hita fa tsy dia mora loatra izany. Novidiko izy ireo nefa tsy nieritreritra avy hatrany. Ary avy eo nanjary tamin'ny fampiharana. Ary manana olona fisaka sy an-trano aho.
Tsy misy afa-tsy hena amin'ny toto-kena. Tsy mampiasa tongolo, voatabia sns. Izany rehetra izany dia aroso tsirairay amin'ny lovia vita. Ny hany zavatra ataoko indraindray dia ny manisy sombin-kisoa kely eo anelanelan'ny hena sy mifamatotra kokoa. Ho an'ny tsiranoka. Miezaka ny manao ny ampahany kely (mahery indrindra) aho. Mora mahandro miadana kokoa izy ireo. Ho an'ny ambiny, tsy misy fahendrena. Afa-tsy izany angamba. Raha sombina endrika lava iray no sendra azy dia mazava ho azy fa manitsakitsaka azy isika. Ka rehefa tsy mahantona loatra ny mahandro. Izay rehetra entintsika mankany amin'ny brazier. Aza midradradradrà maka ny takelaka fanapahana ho mpankafy. Mba hahatonga ny saribao hilalao mahafinaritra kokoa, indraindray ianao mila mitondra ny rivotra eny ambonin'izy ireo. Ary fitoeran-drano kely misy rano madio. Raha sendra malalaka ny arina arina ataontsika. Tsy azo atao ny mitifitra! Taratra infrared fotsiny.
Kabo kisoa endasina - fomba fahandro
Mampitambatra ny arina manerana ny barbecue izahay ary mamelatra ny skewers misy elanelana kely indrindra avy amin'izy samy izy. Rentsika ny manaitra azy. Hamarininay fa tsy misy afo misokatra. Rarahana rano kely raha ilaina izany. Aorian'ny 10 minitra dia mihodina 180 degre ary miandry 10 minitra hafa. Mandritra izany fotoana izany dia mametraka ny latabatra ny mpianakavy: tapaka ny mofo sy ny legioma. Ny kebab dia tokony hohanina mafana. Miaraka amin'ny hafanana, raha lazaina, miaraka amin'ny hafanana! Mazotoa homana.
Ary aza adino ny mamono ny afo. Ny fiarovana no voalohany!
Kebab (lula kebab) voahitsakitsaka: fofona sakafo
Kebab - inona izany? Ahoana no mahandro, inona no hanompoana azy?
Mamy mangatsiaka mangatsiatsiaka: fomba fikarakarana sakafo haingana
Tavoahangy matsiro sy mamy ao anaty lafaoro
59 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 2,162.